Kutaa armaan gadii, matadureewwan gargaarsa bafatawwan fi qaaqawwaniif tarreessa.
Foddaan galmee of keessatti qabate ati irratti hojjechuu barbaaddu akka ajajoota baafataa fayyadamuuf filatamuu qaba. Haaluma walfakkatuun, ajajoota baafataa wanta waliin firooman fayyadamuuf wanta galmee keessaa filachuu qabda.
Baafatawwan rifachisaa halqalaati. Kana jechuun maalimootni baafataa kun hojii amma hojjetamaa jiruuf faayidaa qabeessa ta'anii jiraatu. Yoo qareen barruu keessatti iddeeffame, maalimootni baafataa barruu gulaaluuf fayyadan hundi ni jiraatu. Yoo galmee keessaa saxaatoo filatteetta ta'e, maalimoota baafataa saxaatoo gulaaluuf fayyadan hunda agarta.
Ajajootni kun galmee ammaatiif fayyadamu, galmee haaraa bani, yk fayyadama cufi.
Baafati kun ajajawwan agarsiissa argii-irraa kan galmee too'achuuf gargaran of keessa qaba.
Ajajoota toorii, fi qabeentoota galmee keetii dhangeessuuf gargaran of keessaa qaba.
Ajajawwan, gabatee galmee barruu keessatti saagi, gulaali, fi haqi mul'isa.
Ajajoota faddaalee galmee too'achuu fi agarsiissuudhaaf garagaru of keessaa qaba.
Title is: Baafatoota